Akụkọ Bible: Site n’Eze Mbụ nke Izrel Ruo ná Ndọrọ n’Agha Laa Babịlọn - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
Sọl ghọrọ eze mbụ nke Izrel. Ma Jehova mesịrị jụ ya wee họrọ Devid ịnọchi ya dị ka eze. Anyị ga-achọpụta ọtụtụ ihe banyere Devid. Mgbe ọ bụ nwa okorobịa, ọ lụsoro Golayat ọgụ. E mesịa, o si n’ụlọ Eze Sọl na-emere ya anyaụfụ gbapụ. Abigel bụ́ nwaanyị mara mma gbochikwara ya ime ihe nzuzu.
Anyị ga-amụkwa ọtụtụ ihe banyere nwa Devid bụ́ Solomọn, bụ́ onye nọchiri Devid dị ka eze Izrel. Ndị eze atọ mbụ nke Izrel chịrị afọ iri anọ n’otu n’otu. Mgbe Solomọn nwụsịrị, e kewara Izrel gaa n’alaeze abụọ, alaeze nke ebe ugwu na nke ebe ndịda.
Alaeze ebo iri nke dị n’ebe ugwu dịgidere ruo narị afọ abụọ na iri afọ ise na asaa, tupu ndị Asiria ebibie ya. Otu narị afọ na iri afọ atọ na atọ ka nke ahụ gasịkwara, e bibiri alaeze ebo abụọ ahụ dị n’ebe ndịda. N’oge ahụ, a dọọrọ ndị Izrel n’agha laa Babilọn. Ya mere, NKEBI NKE 4 kọrọ ihe ndị mere eme nke were narị afọ ise na afọ iri, ọ bụkwa n’oge ahụ ka ọtụtụ ihe ndị na-akpali akpali mere.